Any amin'ny firenena maherin'ny 50, ny angovo avy amin'ny masoandro no mora vidy indrindra amin'ny rehetra. | Fanavaozana maintso
Any amin'ny firenena maherin'ny 50, ny angovo avy amin'ny masoandro no mora vidy indrindra amin'ny rehetra.
Ny fiaraha-monina dia manohy miady hevitra momba ny hoe fahendrena ve ny tsy miloka be amin'ny angovo azo havaozina, ny teknolojia angovo dia mahatratra ny governemanta atsasaky ny tany ary eo an-dàlana hamadika an'io adihevitra io ho zavatra lany daty tanteraka izy ireo.
Angovo avy amin'ny masoandro, izay nanjary mora vidy kokoa tamin'ny taon-dasa mihoatra ny 75%, dia efa mora vidy kokoa noho ny karazana angovo hafa vokarina amin'ny arintany, solika na gazy.
Tsara daholo izany, saingy tsy ampy izany. Raha te ho mpilalao manerantany ny angovo avy amin'ny masoandro dia mila izany mahasoa kokoa noho ny loharanom-baovao angovo hafa kely: Amin'izao fotoana izao dia efa misy izy io, ary any amin'ny firenena maherin'ny 50, ny angovo avy amin'ny masoandro no angovo mora indrindra amin'ny rehetra.
1 20 taona izao ny adin'ny angovo
2 Ny herin'ny masoandro dia afaka mifaninana amin'ny olona rehetra
3 Ny vidin'ny angovo avy amin'ny masoandro vs ny vidin'ny arina
4 Firaketana vaovao any Dubai amin'ny vidin'ny angovo hafanana amin'ny masoandro
Firaketana vaovao any Dubai amin'ny vidin'ny angovo hafanana amin'ny masoandro
Nanambara ny vidin'ny tolo-bidy ho an'ny tolotra consortia miisa efatra ho an'ny fampandrosoana ny fizarana faha-200 megawatt ao amin'ny valan-javaboahary Mohammed bin Rashid Al Maktoum ny Dubai Electrical and Water Authority (Dewa). Ny tolotra ambany indrindra natolotra ho an'ity tetikasa angovo masoandro mifantoka ity dia 9,45 cents US (eo amin'ny 8.5 cents eo ho eo) isaky ny kWh.
Ity sarany ity dia maneho rakitsoratra vaovao, satria ny teo aloha dia 40% ambony noho ny vidiny ambany indrindra natolotra hatreto. Tolotra roa hafa nanolotra vidiny ambany ihany koa izy ireo amin'ny 10 cents euro isaky ny kWh.
Ny malemy ho an'ny dingana fahefatra amin'ny zaridaina mpamokatra herinaratra misy thermosolar miaraka amin'ny teknolojia tilikambo dia ahitana ny fitehirizana angovo mandritra ny 12 ora, izay midika fa afaka mitohy ity saro-takarina ity mamatsy herinaratra mandritra ny alina, ary io no dingana voalohany amin'ny fivoarana izay mikasa ny hanana angovo 1.000 XNUMX MW amin'ny masoandro amin'ny alàlan'ny teknolojia tilikambo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Angovo azo havaozina » Any amin'ny firenena maherin'ny 50, ny angovo avy amin'ny masoandro no mora vidy indrindra amin'ny rehetra.
Mandroso isan'andro ny desertitra any Espana
Ny lavaka oliva dia loharanom-angovo ho an'ny hotely